Macnaha guud. Muxuu yahay macnaha guud iyo maxaa loogu talagalay | War gadget
Tusmada tusmada macnaha guud
Maanta waan arki doonnaa waa maxay macnaha guud iyo maxaa loogu talagalay. Waxaan sidoo kale arki doonaa sida menu-ka macnaha guud uu isu beddelo iyadoo ku xiran hadba barta uu ku yaal shaashadda shaashadda iyo geesinimada iyo khibradda badan waxaan ku siin doonaa macluumaad ku saabsan sida wax looga beddelo menu-ka iyadoo lagu darayo ama laga saarayo walxaha. Hagaag aan ku bilowno qeexitaanka "macnaha guud".
1 Waa maxay macnaha guud?
2 Muxuu yahay liiska macnaha guud?
3 Windows XP desktop macnaha guud
4 Macnaha guud ee faylka
Waa maxay macnaha guud?
Liiska macnaha guud iyos daaqadda uu furmayo markaan midig-riixno jiir. Liiskani waa cunsur nololeed ku shaqeeya nidaamka hawlgalka tan iyo markii wax laga beddelay iyadoo lagu darayo waxyaabo cusub oo ku jira liiska macnaha guud marka aan rakibno barnaamijyo cusub.
Dhammaan barnaamijyada aan rakibeyno wax kuma daraan macnaha guud waana in la yiraahdaa nasiib wanaag, maadaama haddii kale menu-kani uu u kori doono qaab buunbuunin ah, oo hortaagan shaqadiisa ugu weyn. Waa maxay shaqada ugu weyn ee meeriska macnaha guud?, sii wad akhriska:
Muxuu yahay liiska macnaha guud?
Liiska macnaha guud wuxuu u adeegaa inuu fududeeyo hawl maalmeedkeenna kombuyuutarka. Markaan fureyno macnaha guud adigoo gujinaya badhanka midig ee midig (midka bidix hadaad u habeysid hadhaaga) waxaan helnaa daaqad ay kujiraan xulashooyin badan sida sameynta galka ama marin toos ah, isku soo koobida feyl, ku ciyaarida mp3s-kaaga, iskaanka faylka fayraska antivirus, iwm, oo intaas oo dhan waxaan ku qaban karnaa si toos ah oo aanan u furin barnaamijka ku lug leh ficilka la xushay horay.
Sidii aan horayba u sheegay, waxay kuxirantahay aagga shaashaddaada aad kufureyso meertada macnaha guud leh, waxay soo bandhigi doontaa hal dhinac ama mid kale oo ku kala duwan waxyaabaha ay muujineyso ama ay ku jirto menu-keeda. Aynu eegno tusaalooyinka qaarkood.
Windows XP desktop macnaha guud
Haddii aan ku riixno badhanka midig ee midig ee aagga bilaashka ah ee kumbuyuutarkaaga waxaan helnaa menu-ka macnaha guud ee soo socda:
Dhexdeeda waxaad ku arki doontaa wax kasta oo aad ku sameyn karto walxaha ku jira desktop-kaaga, sida abaabulka calaamadaha. Haddii aan dul saarno dulqeeyaha wax kasta oo menu ah oo fallaar dhinaceeda ku leh, menu kale oo hoos-u-dhacaya ayaa soo muuqan doona sida aad ku arki karto sawirka kore.
Inkasta oo aan ka hadlayno menu-ka macnaha guud ee Windows XP, tani sidoo kale waxay la mid tahay Windows 7 iyo Windows 10. In kasta oo ay xaqiiqda tahay in nidaamka la cusbooneysiiyay sannadahan oo dhan, menu-ka macnaha ayaa weli jira oo wuxuu leeyahay hawlgal la mid ah dhammaan noocyada.
Sida loo dejiyo fiidiyow sida gidaarrada Windows 7
Macnaha guud ee faylka
Haddii aan riixno faylka menu-ka macnaha guud ayaa ku kala duwanaan doona iyadoo kuxiran kordhin taasi waxay leedahay faylkaas (qaabkiisa). Tusaale ahaan, kani waa qaabka macnaha guud ee feyl leh kordhinta PDF.
Liiskan waxaan ku aragnaa cunsurro aan ka muuqan macnaha guud laga soo qaado desktop-ka Windows, sida "Scan ..." ikhtiyaarka ah inaad iska hubiso fayraska in faylka PDF uusan ku jirin fayrasyo ​​ama hanjabaado kale oo la yaqaan. Waxaan sidoo kale arki karnaa curiye "IZArc" oo furaya liis labaad oo aan ku awoodno cadaadin faylka PDF adigoo isticmaalaya kombaresarada IZArc.
Laakiin sidaan horayba u iri, menu-kan ayaa ku kala duwanaan doona iyadoo ku xiran nooca feyl ee aan ugu yeerno. Tusaale ahaan, haddii aan furno menu-ka macnaha guud adigoo gujinaya midig-guji faylka .DOC (Faylka ereyga) halkii aan ka furi lahayn feylka .PDF, waxaan helnaa menu-ka guud ee soo socda.
Sidaad u aragto, menu-kan ayaa ka ballaadhan kii hore oo sidoo kale waxaa ku jira ikhtiyaarka daabacaadda ee menu-ka kale ee macnaha guud uusan keenin.
Waxaan ka heli karnaa kuwo badan menus macnaha guudWaxaan horay u aragnay qaar laakiin kala duwanaanshuhu waa mid aan la koobi karin, ku dhowaad dhammaan barnaamijyada waxaan ka heli doonnaa menusyada macnaha guud leh si ay nooga caawiyaan inaan howlaha si dhakhso leh u qabanno iyadoon loo baahnayn in lagu dhex maro qormooyinka barnaamij kasta. Marka waxaan kaliya arki doonnaa tusaalooyinka horey loo muujiyay.
Waxaan doonayay inaan maanta sharaxo waxa ay yihiin menus-yada macnaha guud leh iyo waxa loogu tala galay maxaa yeelay habkaas casharrada mustaqbalka waxaan ku tilmaami doonaa iyaga haddii qofna uusan garanaynin menusyada macnaha guud leh, waxay kaliya ku qasban yihiin inay ku hakadaan halkan si ay fikrad uga helaan.
Kuwa doonaya inay wax badan ka ogaadaan menusyada macnaha guud leh, waxaan kuu sheegayaa inay suurtagal tahay in la calaamadeeyo adoo ku daraya ama ka saaraya waxyaabo ka mid ah. Inkasta oo qaar ka mid ah hawlgalladaas si fudud loo samayn karo, kuwa kalena ay aad u dhib badan yihiin oo ay ka baxsan yihiin baaxadda maqaalkan. Maalin kale waxaan arki doonaa sida si fudud wax looga qabto wax ka beddelka macnaha guud. Hada iyo kuwa doonaya inay si buuxda gacanta ugu hayaan menu-ka macnaha guud, waxaan kugula talinayaa inaad aqriso maqaalkan ku saabsan menu macnaha guud, laakiin leh DIGNIIN cad, maqaalka laguma talinayo dadka layliska ah iyo adeegsadayaasha khibrad la'aanta ah maadaama ay tahay inaad wax ka qabato diiwaanka Windows si aad wax uga beddesho menu-ka macnaha guud. Dhanka kale, waxaan kugula talinayaa in qofkasta oo khibrad dheeraad ah leh uu fiiriyo labada qodob iyo bogga Erwind ried.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Software » Macnaha guud
77 faallooyin, ka tag taada
Waa salaaman tahay, waxaan rabaa in aan iraahdo boggan si aad u wanaagsan ayaa loo qaabeeyey waxaana rajeynayaa inay sii wadi doonaan sameynta bogag si fudud loo fahmi karo oo noo sharxi doona sida aad u sameyso, hambalyo iyo waad ku mahadsan tahay waqtigii aad gelisay waqtigaaga dhismaha bogagga si aan annaga isticmaaleyaashu u leenahay ugu fiican
Ku jawaab dianita
Waan ku faraxsanahay inaad jeceshahay bogga, waxaan kuu soo dirayaa salaan qaali ah oo ku saabsan ereyadaada wanaagsan.
waa inaad lahaataa qaybo ka mid ah liiska macnaha guud
Ku jawaab brenda
heyy waad ku mahadsantahay macluumaadka 😉 way ii adeegtay howsha ings salaan 🙂
heyy waad ku mahadsantahay faafaahinta ay ii qabatay howsha ... salaan
Ku jawaab faby
hay cunug igu caawi shaqadayda guriga… nimco
Ku jawaab luchiaca
Waad salaaman tahay, runtii waxaan u maleynayaa in bartaadu ay fiican tahay.
Laakiin dhibaato ayaan ku qabaa menu-ka macnaha guud ee kombuyuutarkayga waxaanan jeclaan lahaa inaan kaaga sheego arrintaas si aan u arko haddii aad i caawin karto iyo in kale. Waxay dhacdaa in markaad furto MiPC oo aad midig u gujiso wixii disk disk ah, ha noqoto diskiga adag, USB-ga ama CD-ga, kumbuyuutarku kama jawaabayo mana furi doono macnaha guud. Laakiin waxay ku jirtaa oo keliya MyPC, maxaa yeelay fayllada haddii aad furto menu-ka macnaha guud leh. Ma i caawin kartaa fadlan ???? Ma aqaan waxa la sameeyo ama sida loo raadsado caawimaad dhibaatadan.
jawharad !! dijo
aad baad ugu mahadsantahay kaalmadan
waxay ahayd inaad waxbadan i caawiso
shaqadayda guriga ee xisaabinta
oo marka laga reebo aad ayey u fududahay maxaa yeelay waad nuqulan kartaa
Heer sare !!
by: jawharad :);)
Ku jawaab jawharad !!
@Pao waxay u badan tahay in maamule nidaam uu ikhtiyaarkaasi naafo yahay. Haddii aad tahay qofka kaliya ee isticmaalaya kumbuyuutarka, waxaa laga yaabaa inaad qabtid fayras.
Waad salaaman tahay: runtii waan ka helay boggaaga. Waan u gaadhay maxaa yeelay waxaan dhibaato ku qabaa menu-ka macnaha guud leh; fiiri haddii aad i caawin karto:
Waxaan ku duubaa feylasha codka makarafoon. Waxaan jeclaan lahaa taas, markaan abuurayo mid, si aan ugu abuuri karo galka macnaha guud, guji «Cusub», iyo in, halkaas, sida aan u helo feyl cusub oo ereyga ah, ama feyl cusub oo PowerPoint ah , Waxaan helayaa ikhtiyaarka faylka codka cusub, ama wav, si aan u siiyo magac, ka dibna, si toos ah uga furto barnaamijka wax lagu qoro, anigoon u baahnayn inaan keydiyo oo aan markaa magacaabo.
Taasi waa suurtagal, maxaa yeelay shaqada way shaqeysaa (taasi waa daaqadaha 2000), laakiin guriga dhexdiisa, ma ahan (waxaan haystaa Vista). Waad ku mahadsan tahay boggaaga, waxaanan rajaynayaa, aniga ka sokow, su'aasha iyo jawaabtu inay dan guud yeelan karaan.
Hagaag, wax fikrad ah kama haysto sida loo sameeyo waxaad u baahan tahay Damian. Waxaan kugula talinayaa inaad sameyso dhowr baaritaan oo Google ah sida "ku dar toobiye macdanta macnaha guud" ama "shortcut context view view" si loo arko inaad nasiib leedahay.
HEY WAAD KU MAHADSAN TAHAY MACLUUMAADKA AY SI AAD AYAAN IIGU ADEEGTAY WAQTIGA
Ku jawaab jefferson
Grace wax badan ayey ii adeegtay oo sii wad
Ku jawaab Euphronia
eta laadka hahahaha waad ku mahadsantahay macluumaadka
Uma isticmaalin infankan laakiin si kastaba ha noqotee tankyou
Jawaab ku dheji
Haddii kombiyuutarka ay isticmaalaan dad badan, koontadaadu way xadidan tahay mana lihid ogolaansho inaad ku furto menu-ka macnaha guud ee cutubyada. Haddii ay tahay kombiyuutarkaaga gaarka ah, waxay noqon kartaa fayras ama khayaano. Gudub antivirus iyo antispyware.
Wax badan ayey i caawisay
Hagaag, runtu waxay tahay inaan ogaa waxa taasi lafteeda ahayd, hadii aan si sax ah u riixo iyo isticmaalkeeda iyo wax la mid ah, ma aanan ogeyn waxa loogu yeero taas, waxay iila muuqatay wax aniga ii ah, laakiin ma aanan ogeyn waa maxay.
Ku jawaab Coketuelo
Hagaag, ima aysan caawin laakiin waa qabow…. kuwa kale = (^^) =
Maaha inaan ahaa BAa vuzcanDDop laakiin weno 3 <0 !! = (* _ XNUMX) =
haddii tani ay caawiso demo, wax dhib ah maleh !! anyway, mahadsanid
Mahadsanid, waxay igu caawiyeen kaliya wixii aan u baahnaa. bye bye;)
Waad salaaman tahay, dhibaato ayaan qabaa, waana marka aan dhagsiiyo toobiye aan ku haysto desktop-ka illaa diskiga banaanka, kama furmayo saxannada kale waxaanan ka helayaa shaashadda, , isticmaal koontaroolka »Waan isku dayay laakiin ma awoodin inaan sameeyo. Waad ku mahadsantahay horay.
Ku jawaab ortupan
hello wax faa iido ah malahan
Waxay ii adeegtay waxyaabo badan oo muhiim ah, mahadsanid, sii wad
emailkaygu waa jhoncena_12_6@hotmail.com igu dar 8 ======= D
Wax ku biir aad u wanaagsan, hambalyo, sii wad.
Dhibaato ayaan qabaa, markaan dhagsiiyo galka daaqad kale oo raadinta ah ayaa muuqata, sida loo beddelo ikhtiyaarka in la furo halkii laga raadin lahaa menu-ka macnaha guud leh? Ama sida loo abuuro ficilka galka in la furo? Mahadsanid
this chid0o mgraxis haye ayaa ii adeegay
Ku jawaab mar-ia
Waad salaaman tahay, waxaan ubaahanahay inaad i caawiso fadlan, waxaan ubaahanahay talaabooyinka wax looga badalayo tuduca iyadoo la adeegsanayo menu-ka fikradaha leh .. Waxaan rajeynayaa inaad i caawin karto !!
Ku jawaab zanda
Wax badan ayey i caawisay ... Waxaan moodayay inaanan sii wadi doonin raadinta macluumaadka aan ubaahanahay ... ilaa aan ka helo boggan ... mahadsanid
Ku soo jawaab maiia
boggan waa mahadsanid
Adigu (s) waxaad leedihiin (n) habeen wanaagsan
rakibi maktabadda soo socota regsvr32 C: windowssystem32crviewer.dll daaqadaha 7
marka aan fulinayo, waxay ii sheegaysaa lambarka khalad ee soo socda 0x80020009
Ma iga caawin kartaa sidii aan u hagaajin lahaa?
Waad ku mahadsan tahay ka hor dareenkaaga.
aniga i fiiri dijo
hi grax macluumaadka kun mahadsanid
Ku jawaab mireyITA
Waad ku mahadsan tahay, waxay iga caawisay inaan arko sida menu-ka macnaha guud loo soo saaro iyo waxa ay noogu adeegto nimco.
Jawaab laura cecilia cruz dela cruz
Waad ku mahadsantahay macluumaadka aad muhiim iigu ah, aad baad u mahadsantahay
Jawaab EIFFEL JEFELSON
hello menu-ka macnaha guud ee sahaminta internetka aniga ima shaqeynayo maxaan sameyn karaa. Waxay ahayd ka dib markii la rakibey sahamiyaha internetka 8. Waxay dhigeen aaladda loo yaqaan 'accelerator' iyo waxaan u maleynayaa inuu ahaa waxa curyaamiyey badhanka midig ee jiirka laakiin kaliya internetka. Mahadsanid
Ku jawaab pucherete75
ma sheego wax xiiso leh
Waan salaamayaa dadka xarunta nidaamka Barranquilla
Ku jawaab jader
SALAAN SIDAAN CODKAAGA BULSHADAADA. KA SII KHARSAN DHAMMAAN LUA PHRASE JEJEJEJEJ
Jawaab JAZMIN MENDEZ INCLAN
lama garanayo dijo
Aad baad u mahadsan tahay, waa mid xiiso badan oo wax badan i taray
sida xiisaha leh ee la fahmi karo, aad ayaad u mahadsantahay
Ku jawaab brunno
Aad baad ugu mahadsan tihiin wax badan ayey iga caawisay shaqadayda cilmi baarista
Ku jawaab nikol
yaa cadaabta iga caawiya maxay tahay shaashadda fikradda
mahadsanid dilaaga bye bye
Ku jawaab sakura
chido guey wuxuu ii adeegay inaan xasuusto jacaylka iyo salaan nabadeedka kamaradaha adduunka
Jawal ku jawaab
markale dhah hello sakura u sheeg in aan ka imid mex salaan dhamaan dumarka duugga ah ee qurxoon addoonkii jacaylku macasalaama
luci iyo savi dijo
ps macluumaadkan ayaa noo adeegay
Aad baad u mahadsan tihiin waxaanan rajaynaynaa markaan helno
hawl kale oo arrinta ka mid ah halkan aan ka raadinno mid cusub
macluumaad ... salaan *****
Ku jawaab luci iyo savi
Hagaag, aniga waxba iima tarin aniga, haddiiba kan kale
Waxay hayaan macluumaad MUHIIM ah oo dheeraad ah biie 😀
sida waalan, anigu waxaan ahay gaaaayyyyy !!!!
WAAN KU JECLAHAY FADLAN !! waan jeclahay
Ku jawaab diidmada
Waad salaaman tahay, waa hagaag, runta ayaa ah, in macluumaadkaaga uusan waxtar lahayn, ok, waan ka xumahay, waa runta.
horay usoco ok raali ahaw hahahahahahahahahahahahahahahaha
maxaa qosol ah waa inaad
Waad salaaman tihiin !! Dhibaatooyin ayaa iga haysta tarjumaadda caawimaad izarq..Ma isticmaali karo haddii aanan fahmin waxba !! Waxaan rajaynayaa inaad iga caawin karto mahadsanid !!!
waxa ku jira macluumaad fiican laakiin waxaan u maleynayaa inay fiicnaan laheyd in lagu daro macluumaad yar
Ke cool waa wax walba laakiin aad ayey u fiicnaan laheyd haddii ay tusaaleyaal bixiyaan, ma raggan ma rumaysanaysaan ?????????
Waxaan raadinayaa shaqo
Ku jawaab ely
waxba ima tarin
Waad salaaman tihiin. Ma i caawin kartaa fadlan? Waxaan su'aal ku qabaa imtixaanka oo aanan fahmin. Ma liis garaysaa xulashooyinka kala duwan ee ku jira liiska macnaha guud ee bilowga menu-ka ee Windows Vista iyo mid walba muxuu qabtaa? I caawi fadlan…
Ku jawaab HappyBoy
Waad salaaman tahay Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado sida menu-ka macnaha guud loo qaabeeyo ay u tahay imtixaanka dugsiga
Ku jawaab milena
Way fiicnayd mahadsanid!
Waa salaaman tahay waxaan u baahanahay caawimaad aad muhiim u ah hawsha haddii aad maanta iiga jawaabi lahayd si ka sii fiican ...
Hagaag, waxay iweydiiyeen farqiga udhaxeeya macnaha guud ee daaqada faylka iyo daaqada galka, laakiin ma garan karo cida ay tahay iyo sidoo kale waa inaan isku ekaysiiyaa, laakiin maadaama aanan garanayn daaqadaha ay yihiin, Ma garanayo sida loo aqoonsado. Ii sheeg ugu yaraan daaqadda fadlan mahadsanid ...
Aad baan kuugu mahadcelinayaa samaynta macluumaadka noocan ah, oo si wanaagsan loo sharxay, waxaan ku siinayaa 100
Ujawaab inaad germain
waa maxay garx weyn ee ii sharrax
WAAD MAHADSAN TAHAY, AAD BAAN U ADEEGAY
FENKIU WAVE THE BERDAD MA AHA MA DHAHO SABABTAN SABABTA AY AHAYD DARYEEL JOOJI
waad ku mahadsantahay caawimadaada :)
Ku jawaab andreiiitha
Olaa fasalka ayay ku jirtay waxayna iga caawisay inaan nasto .. Mahadsanid
Tani waxay ii adeegtay mahadcelin badan, tani waxay iga dhigtay inaan helo buundo wanaagsan laakiin uma qalmin maxaa yeelay waan koobiyey 🙂
Waad salaaman tihiin. Shaqo ayay i weydiisteen: 8. Qor waxyaabaha ku jira menu-ka macnaha guud ee Windows desktop-ka.
I CAAWI! Mahadsanid!
Ku jawaab Valen
QOF WUXUU GARAN YAHAY SIDEE LOO BADBAADI KARAA TALOOYINKA MENU EE KU SAABSAN?
hello ma iga caawin kartaa su'aashan ...
Sidee menu-ka duruufaha (Excel) loo qaybiyaa? ...
Waad salaaman tahay, ma iga caawin kartaa menu-ka pop-up-ka, fadlan?
Waa maxay wax xun ay i siiyeen 1 taas
Ku jawaab carmelina
Waa maxay wax fiican oo ay i siiyeen 5 taas
hello dhibaato ayaan ku qabaa menu-kayga macnaha guud eray ahaan, markaan si sax ah u riixo way muuqataa laakiin isla markiiba way baaba'aysaa ... fadlan qof ma i caawin karaa
Ujawaabi dina musa